Lufthansa Pack Pack
mubvunzo Lufthansa Pack Pack
1 gore 6 ago #731 by bgf
Ndakamisa Lufthansa pack kubva kune rumwe rutivi uye ndine dambudziko neAirbus A380.
Pandinenge ndichisimudza bhodhi muhotera nekuda kwe NAV, COM, ADF nezvimwewo zvigadziriro haisi kushanda. Izvozvo zvinoreva kuti handigoni kuisa izvi zviyero.
Kana zvisina kudaro ndege iyi yakanaka chaizvo uye ndinoda kuishandisa kakawanda.
Zvichida mumwe munhu angandibatsira?
Time chokusika peji: 0.227 mumasekonzi